फायरहोस्याच: साइट कुराकानी म्याक, आईफोन र आईप्याडसँग एकीकृत | Martech Zone
फायरहोस्याच: साइट कुराकानी म्याक, आईफोन र आईप्याडको साथ एकीकृत
मङ्गलबार, जुन 24, 2014 Douglas Karr
फायरहोस्ट टेक्स्ट जत्तिकै सजिलो छ पुश सूचनाहरूको साथ पूर्ण नेटिभ अनुप्रयोगहरू छन्। तपाईं आफ्नो मोबाइल अनुप्रयोगको साथ तपाईंको आईफोन लक स्क्रिनमा च्याट सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको शारीरिक स्थानबाट पहिचान गर्न सकिन्छ र तपाईं पृष्ठमा भएको पृष्ठको साथसाथै तिनीहरूको प्रणाली जानकारी पनि चिन्न सक्नुहुन्छ। सशुल्क संस्करण पूर्ण अनुकूलन सीएसएस, बहु-उपयोगकर्ता समर्थन र तपाईंको च्याट ईतिहासको साथ आउँदछ।
सायद तपाईले महसुस गरेको भन्दा धेरै ट्राफिक पाउन सक्नुहुन्छ, तर ग्राहकहरू अलमल्लमा परेपछि बाहिर जान्छन् र तपाई बुद्धिमान् हुनुहुन्न। फायरहोस च्याटले तपाईंलाई ती ग्राहकहरु बाहिर जान अघि उनीहरूको संलग्नतामा सहयोग पुर्‍याउँछ। तपाईंले ग्राहकको बढ्दो सन्तुष्टि देख्नुहुनेछ र तपाईको वेबसाइटको दुखाइ पोइन्टहरू के हुन् पत्ता लगाउनुहुनेछ।
ग्राहक एक राम्रो उपयोगकर्ता ईन्टरफेसको साथ आउँछ। तपाईं यहाँमा नि: शुल्क साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ फायरहोस च्याट!
टैग: कुराकानीfirehosechatiOSआईप्याडiphoneम्याकअनलाइन कुराकानीओएसएक्सवेब कुराकानी
फायरहोस च्याट एक राम्रो कोडेड, भयानक र हल्का उपकरण छ। हामी सोच्छौं कि ओएस एक्स प्रणालीको साथ सबै वेबसाइट मालिकहरूको लागि एक उपकरण हुनुपर्दछ र एक सुन्दर ग्राहक सेवा प्रणालीको आवश्यकता छ। आईओएसको लागि पनि चाँडै! हामीलाई मन पर्छ।, हामीलाई राम्रो लाग्छ! Rehype.it बाट स्टेफन